ေငြေၾကး လာဘ္လာဘေတြ ပိတ္ဆို႔ေနလား ႐ြတ္ဆိုသင့္ေသာ အရဟံပ႒ာန္း လာဘ္ပြင့္ဂါထာေတာ္ •
11/07/2019 KPST ဘာသာေရး 0
အေထြေထြ ဗဟုသုတ ေငြေၾကး လာဘ္လာဘ ေတြ ပိတ္ဆို႔ ေနလား ႐ြတ္ဆို သင့္ေသာ အရဟံပ႒ာန္း လာဘ္ပြင့္ ဂါထာေတာ္ ေငြေၾကး လာဘ္လာဘေတြ ပိတ္ဆို႔ ေနတာလား? ေငြေၾကး အတြက္စိတ္ပူေန ရတာလား? ေသာက မ်ားေန ရတာလား?
ဤ ဂါထာကို ႐ြတ္ဖတ္ မယ္ဆိုရင္ အဓိဌာန္ တင္ၿပီး ႐ြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ ရပါမယ္။တစ္ေန႔ကို ၂၄ေခါက္႐ြတ္ဆို ရပါမယ္။၂၄ရက္ တိတိ ေနရာမွန္ အခ်ိန္မွန္ ႐ြတ္ဆို ရပါမယ္။မိမိ ေမြးေန႔ကစ တင္ၿပီး ႐ြတ္ဆို ရပါမယ္။ ထို႐ြတ္ဖတ္ အဓိဌာန္ ဝင္ေနေသာ ကာလအတြင္းမွာ မိမိ တက္ႏိုင္ေသာ ႏွစ္သက္ရာဒါန တစ္ခု ျပဳေပးရပါမယ္။အဖ်က္ မ်ားေသာေၾကာင့္ ဇြဲေကာင္းဖို႔ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ စိတ္ရွိဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ ပါတယ္ဗ်ာ။
ဒီ အခ်က္ေတြ လိုက္နာႏိုင္ၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ သင့္အတြက္ ေငြေၾကး လာဘ္လာဘကံ ပြင့္ဖို႔ မေဝးေတာ့ဘူးလ့ို ေျပာလို႔ရပါၿပီ။အလုပ္မရွိပဲႏွင့္ ေတာ့ ေငြေၾကးမ်ားမ်ား လိုခ်င္ လို႔ေတာ့မရဘူးေပါ့ဗ်ာ။ကိုယ့္ရဲ႕ ပိတ္ဆိုေနတဲ့ ေငြေၾကးကံမ်ား ရသင့္ လွ်က္ၾကန႔္ၾကာ ေနေသာ ေငြေၾကး လာဘ္လာဘမ်ားအျပင္ အျခားေသာ ေနရာ မ်ားမွလည္း ကိုယ့္ရဲ႕ကံ ႏွင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ သဒၵါတရားေပၚ မူတည္ၿပီး ေငြေၾကးလာဘ္လာဘမ်ား ဝင္လာ ပါလိမ့္မယ္။၂၄ရက္ ျပည့္ၿပီးရင္ တစ္ပတ္နားၿပီး ကိုယ့္ေမြးေန႔ ေရာက္မွ အဓိဌာန္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ဝင္ ရပါမယ္။
အရဟံဝတ လာဘံ ေဟတုပစၥေယာ… အရဟံဝတ လာဘံ အရမၼဏပစၥေယာ… အရဟံဝတ လာဘံ အဓိပတိပစၥေယာ… အရဟံဝတ လာဘံ အနႏၲရပစၥေယာ… အရဟံဝတ လာဘံ သမနႏၲရပစၥေယာ… အရဟံဝတ လာဘံ သဟဇာတပစၥေယာ…. အရဟံဝတ လာဘံ အညမညပစၥေယာ… အရဟံဝတ လာဘံ နိႆယပစၥေယာ… အရဟံဝတ လာဘံ ဥပနိႆယပစၥေယာ… အရဟံဝတ လာဘံ ပုေရဇာတပစၥေယာ… အရဟံဝတ လာဘံ ပစာၦဇာတပစၥေယာ… အရဟံဝတ လာဘံ အာေသဝနပစၥေယာ… အရဟံဝတ လာဘံ ကမၼပစၥေယာ… အရဟံဝတ လာဘံ ဝိပါကပစၥေယာ… အရဟံဝတ လာဘံ အဟာရပစၥေယာ
အရဟံဝတ လာဘံ ဣျႏၵိယပစၥေယာ… အရဟံဝတ လာဘံ ဈာနပစၥေယာ… အရဟံဝတ လာဘံ မဂၢပစၥေယာ… အရဟံဝတ လာဘံ သမၸယုတၱပစၥေယာ… အရဟံဝတ လာဘံ ဝိပၸယုတၱပစၥေယာ… အရဟံဝတ လာဘံ အတၳိပစၥေယာ… အရဟံဝတ လာဘံ နတၳိပစၥေယာ… အရဟံဝတ လာဘံ ဝိဂတပစၥေယာ…. အရဟံဝတ လာဘံ အဝိဂတပစၥေယာတိ။
မနက္ ၉ေခါက္ ည ၉ ေခါက္႐ြတ္လည္း ရပါတယ္။ဂုဏ္ေတာ္ ပဌာန္းက်င့္ စဥ္မိုလို႔ အျမတ္ဆုံး ေတြကို ပြားမ်ား ရတာျဖစ္လို႔ လာဘ္လာဘ မေမွ်ာ္ကိုးပဲ ၾကည္ညိဳ စိတ္ျဖင့္ ႐ြတ္ဆို ပူေဇာ္ ပါက ပို၍ အက်ိဳး ထူးခံစားရ မွာျဖစ္ပါ တယ္။
ငွေကြေး လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့နေလား ရွတ်ဆိုသင့်သော အရဟံပဋ္ဌာန်း လာဘ်ပွင့်ဂါထာတော်
အထွေထွေ ဗဟုသုတ ငွေကြေး လာဘ်လာဘ တွေ ပိတ်ဆို့ နေလား ရွတ်ဆို သင့်သော အရဟံပဋ္ဌာန်း လာဘ်ပွင့် ဂါထာတော် ငွေကြေး လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့ နေတာလား? ငွေကြေး အတွက်စိတ်ပူနေ ရတာလား? သောက များနေ ရတာလား?
ဤ ဂါထာကို ရွတ်ဖတ် မယ်ဆိုရင် အဓိဌာန် တင်ပြီး ရွတ်ဖတ် ပူဇော် ရပါမယ်။တစ်နေ့ကို ၂၄ခေါက်ရွတ်ဆို ရပါမယ်။၂၄ရက် တိတိ နေရာမှန် အချိန်မှန် ရွတ်ဆို ရပါမယ်။မိမိ မွေးနေ့ကစ တင်ပြီး ရွတ်ဆို ရပါမယ်။ ထိုရွတ်ဖတ် အဓိဌာန် ဝင်နေသော ကာလအတွင်းမှာ မိမိ တက်နိုင်သော နှစ်သက်ရာဒါန တစ်ခု ပြုပေးရပါမယ်။အဖျက် များသောကြောင့် ဇွဲကောင်းဖို့ ဖြစ်အောင် လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ရှိဖို့တော့ လိုအပ် ပါတယ်ဗျာ။
ဒီ အချက်တွေ လိုက်နာနိုင်ပြီ ဆိုရင်တော့ သင့်အတွက် ငွေကြေး လာဘ်လာဘကံ ပွင့်ဖို့ မဝေးတော့ဘူးလ့ို ပြောလို့ရပါပြီ။အလုပ်မရှိပဲနှင့် တော့ ငွေကြေးများများ လိုချင် လို့တော့မရဘူးပေါ့ဗျာ။ကိုယ့်ရဲ့ ပိတ်ဆိုနေတဲ့ ငွေကြေးကံများ ရသင့် လျှက်ကြန့်ကြာ နေသော ငွေကြေး လာဘ်လာဘများအပြင် အခြားသော နေရာ များမှလည်း ကိုယ့်ရဲ့ကံ နှင့် ကိုယ့်ရဲ့ သဒ္ဒါတရားပေါ် မူတည်ပြီး ငွေကြေးလာဘ်လာဘများ ဝင်လာ ပါလိမ့်မယ်။၂၄ရက် ပြည့်ပြီးရင် တစ်ပတ်နားပြီး ကိုယ့်မွေးနေ့ ရောက်မှ အဓိဌာန် နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ဝင် ရပါမယ်။
အရဟံဝတ လာဘံ ဟေတုပစ္စယော… အရဟံဝတ လာဘံ အရမ္မဏပစ္စယော… အရဟံဝတ လာဘံ အဓိပတိပစ္စယော… အရဟံဝတ လာဘံ အနန္တရပစ္စယော… အရဟံဝတ လာဘံ သမနန္တရပစ္စယော… အရဟံဝတ လာဘံ သဟဇာတပစ္စယော…. အရဟံဝတ လာဘံ အညမညပစ္စယော… အရဟံဝတ လာဘံ နိဿယပစ္စယော… အရဟံဝတ လာဘံ ဥပနိဿယပစ္စယော… အရဟံဝတ လာဘံ ပုရေဇာတပစ္စယော… အရဟံဝတ လာဘံ ပစ္ဆာဇာတပစ္စယော… အရဟံဝတ လာဘံ အာသေဝနပစ္စယော… အရဟံဝတ လာဘံ ကမ္မပစ္စယော… အရဟံဝတ လာဘံ ဝိပါကပစ္စယော… အရဟံဝတ လာဘံ အဟာရပစ္စယော
အရဟံဝတ လာဘံ ဣန္ဒြိယပစ္စယော… အရဟံဝတ လာဘံ ဈာနပစ္စယော… အရဟံဝတ လာဘံ မဂ္ဂပစ္စယော… အရဟံဝတ လာဘံ သမ္ပယုတ္တပစ္စယော… အရဟံဝတ လာဘံ ဝိပ္ပယုတ္တပစ္စယော… အရဟံဝတ လာဘံ အတ္ထိပစ္စယော… အရဟံဝတ လာဘံ နတ္ထိပစ္စယော… အရဟံဝတ လာဘံ ဝိဂတပစ္စယော…. အရဟံဝတ လာဘံ အဝိဂတပစ္စယောတိ။
မနက် ၉ခေါက် ည ၉ ခေါက်ရွတ်လည်း ရပါတယ်။ဂုဏ်တော် ပဌာန်းကျင့် စဉ်မိုလို့ အမြတ်ဆုံး တွေကို ပွားများ ရတာဖြစ်လို့ လာဘ်လာဘ မမျှော်ကိုးပဲ ကြည်ညို စိတ်ဖြင့် ရွတ်ဆို ပူဇော် ပါက ပို၍ အကျိုး ထူးခံစားရ မှာဖြစ်ပါ တယ်။